Saraakiil iyo Ciidamo Boolis ah oo la geeyay magaalada Marko ee gobolka shabeelada hoose. – The Voice of Northeastern Kenya
Saraakiil iyo Ciidamo Boolis ah oo la geeyay magaalada Marko ee gobolka shabeelada hoose.
Wararka ka imaanaya magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelada hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay shalay gaareen saraakiil ka tirsan Ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa ka socday Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM si ay qaymayn ugu sameeyaan xaalada guud ee amaanka magaaladaasi.
Dhanka kale waxaa halkaasi la geeyay ciidamo Boolis ah oo aan saa u tiro badnayn maamulka degmadana uu sheegay inay hour dhac u yihiin ciidamo kale oo ka socda Booliska Soomaaliya kuwaasoo la doonayo in magaalada Marka la geeyo si ay amaankeeda u ilaaliyaan.
Saraakiisha shalay halkaas gaaray ayaa kormeeray xarumo dhowr ah sida saldhiga ciidanka Booliska ee Marka,xarunta maamulka Gobolka iyo qaybo kale waxaana sida ay Masuuliyiintu sheegeen socda qorsheyaal dib u dajin loogu samaynayo dadkii horay Guryahooda uga barakacay.
Ciidanka Milatariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 12 April oo bartamihii bishaan la wareegay magaalada Marka ayaa howlgalo waxay ka sameeyeen deegaanada xeebaha dhaca gaar ahaan Jilin-marka Gandarshe iyo goobo kale oo la rumasan yahay inay ku dhuumaalaysanayeen xubno AL-shababa daacad u ah,waxayna goobaha gaar ciidamadu ka samaysteen saldhigyo Milatari.
Dhanka kale wararka ka imaanaya degmada Walanweyn ee isla gobolkaasi Shabeelada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowlada ee halkas ku sugan ay isu diyaarinayaan howlgalo ay ka fulinayeen deegaano dhowr ah oo u dhexeeya degmooyinka Walanweyn iyo Afgooye.howlgaladaasi ayaana lagu doonayaa in lagu qaado dhowr jidkooyo oo deegaanadaasi taala iyo xoogaga AL-shabaab oo iyaguna halkaas marar badan ka soo qaaday weeraro kala duwan.
Saraakiisha amaanka ee gobolku waxay sidoo kale sheegeen in dhaqdhaqaaqyadooda uu qayb ka yahay qorshe lagu doonayo in la iskugu furo wada weyn ee isku xirta gobolada Banaadir,shabeelada Hoose iyo Bay halkaasi oo marar badan laga soo sheegay dhibaatooyin dhanka amaanka ah.
19-kii bishaan ayay ahayd markii ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo uu hogaaminayay abaanduulihii hore ee Ciidanka Xooga Gen C/laahi cali Caanood ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Marka oo in muda ah ay shabaabku maamulayeen,dowlada Soomaaliya ayaana hada waxay ahmiyad gaar ah siinaysaa gobolka shabeelada Hoose oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ee deegaanada ugu badan ay maamulaan dagaalameyaasha AL-shabaab.
← Myanmar oo ku gacan seyrtay inay xasuuqday bulshada Rohingya